फेरि फिल्मको ओइरो - झल्याकझुलुक - नेपाल
फेरि फिल्मको ओइरो
कुनै समय थियो, निखिल उप्रेती एकै दिन तीन फिल्मको सुटिङ भ्याउँथे । खासमा यस्तो व्यस्तताका पछाडि उनको रहर कम बाध्यता बढी थियो । एक्सनप्रधान हरेक फिल्ममा उनको उपस्थिति अनिवार्य ठान्थे निर्माता/निर्देशक तर सोही अनुरुप फिल्मले व्यावसायिक सफलता अनि प्रशंसा नपाएपछि निखिल मुम्बई हानिए, विरक्तिएर । बलिउडमा जम्ने चाह थियो उनको, चार वर्ष बसे तर माखो मरेन ।
त्यसपछि स्वदेश फर्किए । यतिबेला सौगात मल्ल, दयाहाङ राईजस्ता खारिएका अभिनेताको दबदबा बढिसकेको थियो । त्यसैले निखिलले पुरानो साख फर्काउन नसक्ने अनुमान गर्ने धेरै थिए । तर, भइदियो उल्टो ! उनलाई फेरि फिल्मको ओइरो लाग्न थालेको छ । निर्भय, रुद्र र राधे प्रदर्शन हुन बाँकी छदै पिंजडा ब्याक अगेनमा अनुबन्ध भइसकेका छन् ।
जबकि, उनको पछिल्लो फिल्म किङले बक्स अफिसमा कुनै करामत देखाउन सकेन । यसरी ‘आलुको भाउ’मा फिल्म खेल्दा पुरानै नियति दोहोरिन्छ भन्ने हेक्का निखिललाई कहिले आउला ?
प्रकाशित: फाल्गुन ४, २०७३